कालसँग नडराउने प्राणी विरलै पाइन्छन् । तसर्थ कालका बारेमा कुतूहल हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रा शास्त्रले के भन्छन् त यस विषयमा ? भनिन्छ, विधाताले लेख्छन्, चित्रगुप्तले पढेर सुनाउँछन् र हिसाब राख्छन्, यमदूतले समातेर लान्छन् अनि यमराजले दण्ड दिन्छन् , मृत्यको समय मात्र नभई स्थानसमेत निश्चित छ । दस दिशामध्येमा एक दक्षिण दिशामा यमराजको निवासस्थल छ […]
चमत्कारी औषधिको लागि साङ्ला उत्पादन गर्दै यो देश !
हामीले घर तथा कोठा, भान्साभित्र साङ्ला त देखेकै छौं । धेरैले साङ्लाले दुख दिएको गुनासो पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर चीनमा भने मानिसहरुका लागि यहीँ साङ्ला कमाइको माध्यम बनिरहेको छ । सम्भावित औषधीय गुणका कारण चिनियाँ औषधि उद्योगहरुका लागि साङ्ला व्यवसायिक अवसरको रुपमा खडा भएको छ । चीन लगायतका केही एसियाली देशमा साङ्लालाई तेलमा […]
मनी प्लान्ट घरको कुन दिशा राख्ने ? वास्तुशास्त्र अनुसार यसरी राख्नुहोस्
मनी प्लान्टको बिरुवा घर सजाउन र शुभ संकेतको लागि राख्ने गरिन्छ । त्यसैले घरमा पैसा भित्रिने वा शुभ दिनको लागि धेरै जसो मानिसहरु यो बिरुवा घरमा लगाउने गर्दछन् । तर यसलाई घरमा या अफिसमा वास्तुशास्त्र अनुसार राख्ने हो भने सकरात्मक नतिजा आउन सक्दछ । वास्तुशास्त्रको अनुसार यदि तपाइले मनी प्लान्टलाई गलत दिशामा राख्नु भएको छ […]
भारतको तामिलनाडुमा रामेश्वरमको नजिक एक मन्दिरको शिवलिंग समुन्द्रमा तैरिन्छ । यहाँ भक्तजन पानीमा पसेर शिवलिंगसम्म पुग्छन् र पुजा गर्छन । किम्बदन्ती अनुसार यो ठाँउमा भागवान श्रीरामले रावणलाई युद्धमा हराएपछि विभीषणको राज्याभिषेक भएको थियो । रामेश्वरमदेखि १३ किलोमिटर दुरीमा कोन्थदारामार मन्दिर छ । जसलाई विभीषणको एकमात्र मन्दिर मानिन्छ । यो मन्दिरको छेउमा बंगालको खाडी र मन्नारको […]
दिनभरको काम शुभ बनाउन विहान केही काम अनिवार्य गर्न जुरुरी रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ । दिनको संकेत विहानले देखाउँछ भनेझैँ बिहान राम्रो काम गर्यो भने त्यो दिन निकै उत्तम रहने शास्त्रमा उल्लेख छ । विहानका राम्रा कामले गर्दा तपाईको दिन शुभ रहने र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास गरिदै आएको छ । आज हामी तपाईलाई […]
हात वा अन्य कुनै बस्तुले छुने बित्तिकै यसको पात ओइलाएर बन्द हुने हुनाले यसलाई लाजवन्ति झार भनिएको हो। गाउँघरतिर यसलाई गाइबस्तुको घाँसको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।यस बाहेक यसलाई जडिबुटि वा औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अभुमका हर्बल प्रा लि अहमदाबादका डाइरेक्टर डा दीपक आचार्य यहि झारको औषधिय गुणको बारेमा बिगत १५ बर्षदेखि भारतको बिभिन्न […]
एउटा रहस्यमयी गाउँ, जहाँ सुतेपछि महिनौंसम्म उठ्दैनन् मानिस
संसार विभिन्न प्रकारका रहस्यले भरिएका छन् । यस्ता थुप्रै कुराहरु हुन्छन् जसको जवाफ अहिलेसम्म कसैले पनि दिन सकेका छैनन् । वैज्ञानिक पनि यस्ता थुप्रै रहस्यमयी कुराको जवाफको खाजी गर्दागर्दै थाक्ने गर्दछन् । केही यस्तै रहस्य लुकेको छ काजकिस्तानको एक अचम्मको गाउँमा । यहाँका मानिसहरु थुप्रै दिनसम्म सुतिरहन्छन् । उत्तरी काजकिस्तानको कलाची गाउँका मानिसहरु रहस्यमयी तरिकाले […]
विवाह नहुँदै गर्भवती हुने युवतीलाई यस्तो छ सजाय
युगान्डामा अविवाहित युवती गर्भवती भएमा सबै भन्दा कठोर सजाय दिने गरिन्छ । मर्नका लागि उनीहरुलाई एक विरानो टापुमा लगेर छोड्दिने परम्परा छ । जस मध्ये थोरै भाग्यमानी मात्र यस्तो अबस्थामा बास्न सक्छन्। यस्तो सजाय पाउँदा पनि बाच्न सफल एक युवती हुन्, माउदा कितारागाबिर्वे । जो १२ वर्षकै कलिलो उमेरमा गर्भवती भएकी थिइन्। जसकारणले उनलाई मर्नका […]
आलुबाट यसरी निकाल्न सकिन्छ बिजुली
हामी नेपालीहरु प्राय सबैको भान्सामा आलु पाक्छ । यसका अलावा आलुबाट बिजुली समेत निकाल्न सकिन्छ । त्यसको लागि दुईवटा धातुको पाताको आवश्यकता पर्छ । पहिला एनोड जुन नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हो । त्यो जस्ताको पाता हुनुपर्छ । त्यसैगरी दोस्रो क्याथोड, जुन पोजेटिभ इलेक्ट्रोड हो यो तामाको हुनु जरुरी छ । आलुको भित्र रहेको एसिड, तामा र […]
सावधान ! शनिवार यी ५ चीज नकिन्नुहोस्
शास्त्रमा केही यस्ता चीजका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जुन शनिवारको दिन किनमेल गर्नु हुँदैन । खासगरी, फलामबाट बनेको चीज छ भने त्यसलाई नकिन्दै राम्रो हुन्छ । फलामको किनमेल : फलामलाई शनिदेवको धातु मानिन्छ र शनिवारको दिन फलामबाट बनेको सामान दान गर्नाले शनिदेव प्रसन्न हुन्छन् भन्ने पनि मान्यता छ । तर, यदि तपाई यसको विपरित फलाम […]
पंक्षीहरुले पनि आत्महत्या गर्छन् र ? पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर, भारतमा एउटा गाउँ नै यस्तो छ जुन चराचुरुंगीको आत्महत्याका लागि चर्चित छ । जब सेप्टेम्बर महिना सुरु हुन्छ भारतको दक्षिणी असमस्थित दिमा हाँसो जिल्लामा पर्ने जतिंगा गाउँको चर्चा सुरु हुन्छ । गाउँ चर्चामा आउनुको कारण हो त्यहाँ चराचुरुंगीले आत्महत्या गर्नु । वास्तवमा अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म […]
दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक आदिवासी, यस्तो छ जीवन
इथियोपियाका मुर्सी आदिवासीलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक आदिवासी मानिन्छ । यो आदिवासीको मान्यता छ कि जीवनमा कसै न कसैलाई मार्नैपर्छ । कसैलाई मार्न नसकी आफू ज्यूँदो रहनु भन्दा आफैं मर्नु बेस हुन्छ । दक्षिण इथियोपिया तथा सुडानको सीमा क्षेत्रस्थित ओमान उपत्यकामा बस्ने यो आदिवासीको जनसंख्या करीब १० हजार छ । यो आदिवासीमा जिउमा अनेक खाले परिवर्तन […]
परीक्षामा सफल हुन १० सजिला उपायहरु
परीक्षार्थीले निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा परिक्षामा सफल र राम्रो अङ्क ल्याउन सकिन्छ । जिबनमा सफल हुनको लागि पढाइलाई सामान्य बनाउनुहाेस् । परीक्षामा सफल हुने केहि उपायहरु यस प्रकार छन् आत्मबिश्वासका साथ अध्ययन गर्ने, पढाइ नै सबथोक हो भनेर नसोच्ने तर केही थोक हो भनेर सामान्य तरिकाले पढ्ने, मनलाई नियन्त्रणमा राख्ने, एक घण्टा पढ्ने […]
तपार्इकाे शरीरमा कोठि छ ? शास्त्रीय मान्यता अनुसार यसको प्रभाव पनि जान्नुहाेस्
मानब शरीरमा हुने आर्को चिन्ह कोठि पनि हो । शरीरमा विभिन्न स्थानमा भयका कोठिहरु पनि शुभ अशुभ फल प्रदान गरिरहेका हुन्छन । त्यसो त आधुनिक बिज्ञानमा शरीरका त्येस्ता कोठिहरु हटाउनु सामान्य बन्दै गएको छ | शरिरका बिभिन्न भागमा भयका कोठिले दिने फल निम्नानुसार छ : टाउकामा – समृद्धि तथा ज्ञानी स्वाभबका हुन्छन्। निधारको (दायाँ)– धन […]
हाम्रो निधारका केहि रोचक तथ्यहरु
निधार चाउरिनु उदासिनताको प्रतीक हो । जब मानिस आफुले गरेको कामबाट असफल हुन्छ, कसैबाट धोका खाइरहेको हुन्छ,त्यस्ता मानिसमा नैरश्यता र दिक्दारी छाउँदा निधार चाउरिन्छ । यदि निधारमा रेखाहरुका अतिरिक्त अन्य कुनै चिन्ह वा चाउरिपन देखिन्छ भने त्यसका आधारमा मानिसमा भएको गुणहरु र अवगुणहरु थाहा पाउन सकिन्छ: लामो र चौडा निधारमा चाउरिपन देखिने मानिसहरु दुरदर्शि र […]
ब्राजिलमा इलाहा दा क्युइमाडा ग्राण्ड नाम गरेको एक टापु सर्पको बासस्थानको रुपमा चिनिन्छ । जहाँ मानिसको सट्टामा सर्पहरु बस्ने गर्छन् । यो टापुलाई विश्वकै सबैभन्दा खतरानक टापु पनि मानिने गरिन्छ । साथै यो टापुलाई सर्पको टापु नामले पनि चिनिन्छ । यो टापु चार लाख ३० हजार वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो टापुमा विश्वको सबैभन्दा धेरै सर्प पाइन्छ । यो टापुमा एक लाइट हाउस रहेको छ […]
माया शब्दसँग जोडिएका रोचक तथ्यहरु
मायाको अर्थ जस्ले जे नै भनेपनि तर एउटा साँचो माया यतिसम्म शक्तिशाली हुन सक्छ कि, त्यसको अन्दाज कसैले पनि लागाउन सक्दैन । किन कि, मायाको कुनै मापन छैन र ‘पावर अफ लभ’ कति भन्ने अनुमान नै गर्न सकिन्न । भनिन्छ नि, ‘यो दुनियाँ मायाले नै चलेको छ ।’ आज हामी तपाईहरुलाई मायाबारे केहि यस्ता रोचक […]
मानिसको मृत्यु सम्बन्धि केहि रोचक तथ्यहरु
मानिसको जन्मपछि मृत्यु हुने गर्दछ । मृत्युलाई रोकेर रोक्न सकिदैन । तर हामीमध्ये धेरैलाई मृत्यु बारेमा थाहा नभएका केहि रोचक तथ्यहरु यस प्रकार रहेका छन् : तपाइको मृत्युको दिनमा टेन्सन नलिनुस, तपाइँसंगै उक्त दिन अरु १ लाख ५९ हजार ६ सय ३५ जना पनि मर्दछन् । कुनैपनि मानिसको मृत्यु बुढेसककालको कारण होइन तर बुढेसकालमा लाग्ने […]
यस्ता छन् सुनसँग जोडिएका रोचक तथ्यहरु
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक धातुले हामीमाथि प्रभाव पार्ने गर्दछ किनभने यो सबै सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहको खेल हो । हरेक धातुको एक विशेष ग्रहसँग सम्बन्ध हुन्छ । यी ग्रहले ती धातुलाई आफू अनुसार प्रभावित गर्ने गर्दछ । तामा, चाँदी, सुन वा महँगा रत्न वा हिराले बनेको आभुषण, यी सबै कुराले कि त हामीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने […]
कालो मरिचको जादु ! बिग्रिन लागेको काम बन्ने, मालामाल भईने
लाख कोशिस गर्दा पनि काम बनिरहेको हुँदैन वा बनिसकेको काम बिग्रेर हैरान हुन्छ । हाम्रै भान्सामा भएको यो चिजले तपाईंको सबै समस्या हटाइदिन्छ । के तपाईंलाई थाहा छ हाम्रै भान्सामा हुने यी चिजले तपाईंको भाग्य चम्काउन सक्छन । यी सामानबाट गरिएको छोटो सजिलो उपायले तपाईंको जिबन फेरिनुका साथै सुख समृद्धि शान्ती मिल्छ । यदी कुनै […]